Mingalarpar: April 2011
၂၈-၈-၈၈ နေ့ သတင်းစာမှ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း ဦးအောင်ကြီး၏ သတင်းတစ်ပုဒ်။
ဇာတ်လမ်းအစကိုတော့ ဆရာဖေမြင့်၏ နှလုံးသားအာဟာရ စာအုပ်ထဲမှာပါသည့် စာတစ်ပုဒ်ကို ကူးချပြီး စရမည် ထင်သည်။ လူတိုင်းလိုလို သိပြီးဖြစ်မည့် အကြောင်းအရာဟု ထင်ပါသည်။
မဟတ္တမ ဂန္ဒီရဲ့ ဖိနပ်တစ်ရံ
တစ်နေ့ မဟတ္တမ ဂန္ဒီကြီး ခရီးသွားရန် ရထားပေါ်အတက်မှာ သူ၏ ဖိနပ်တစ်ဖက် ကျွတ်ပြီး အောက်ဘက်သံလမ်းပေါ် ကျသည်။ ရထားက ထွက်စပြုနေပြီဖြစ်ရာ သူကောက်မယူနိုင်တော့။
ဘေးလူတွေ ငေးကြည့်နေကြဆဲ ဂန္ဒီက အေးအေးဆေးဆေးပင် သူ့မှာ ကျန်နေသေးသည့် ဖိနပ်တစ်ဖက်ကို ချွတ်ကာ စောစောက ကျွတ်ကျခဲ့သည့် နေရာဘက်ဆီသို့ လှမ်းပစ်လိုက်သည်။
"ဟာ ဘာလုပ်တာလဲ" ခရီးသည်တစ်ယောက်က မေးသည့်အခါ ဂန္ဒီကြီးက ပြုံးပြီး "စောစောက တစ်ဖက်တည်း ကောက်ရမယ့်လူ အခုတော့ တစ်ရံရသွားပြီပေါ့ဗျာ။ အဲဒါဆို သူစီးလို့ ရသွားပြီ" ဟုဖြေလေသည်။
(မူရင်း - The Little, Brown Book Anecdotes မှ အမည်မသိ စာရေးသူ၏ Shoes) EBook မှ ယူပါသည်။
နောက်ထပ် ကျွန်တော်ဖတ်ပြီး မှတ်သားခဲ့ဖူးသည်မှာ ဂန္ဒီကြီးနှင့်ပင်ဆိုင်သည်။ ကျွန်တော် အမှတ်မမှားလျှင် ဆရာမောင်ပေါ်ထွန်း ဘာသာပြန်ဆိုထားသည့် သန်းခေါင်ယံလွတ်လပ်ရေး (Freedom at Midnight by Larry Collins and Dominique Lapierre, 1975) စာအုပ်မှ ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဘယ်စာအုပ်ကဖြစ်ဖြစ် ကိစ္စ သိပ်မရှိပါဟု ထင်ပါသည်။
မဟတ္တမ ဂန္ဒီကြီး ခရီးတစ်ခုသို့ တတိယတန်း မီးရထားတွဲဖြင့် သွားသည်။ ထိုအချိန်က တတိယတန်းတွဲသည် အဆင့်အနိမ့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲသားများဖြင့် ပြွတ်သိပ် တိုးဝှေ့စီးရသည်။ ထိုအကြောင်းကို သိသောအခါ လူတစ်ယောက်က ဘာလို့ တတိယတန်းဖြင့် သွားသလဲ ဟု မေးသည်။ ဂန္ဒီကြီးက စတုတ္ထတန်း မရှိလို့ပါ ဟု ဖြေသွားခဲ့သည်။
ဂန္ဒီကြီး တတိယတန်းမှာ တိုးဝှေ့ စီးရသဖြင့် ဖိနပ် ကျွတ်ကျခဲ့ရသည်လား မသိ။ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုသည် ခရီးစဉ် တစ်ခုအတွင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့သည်လား....ကျွန်တော်မသိပါ။ ဘယ်ခရီးစဉ်မှာဖြစ်ဖြစ် ကိစ္စ သိပ်မရှိပါဟု ထင်ပါသည်။
ကျွန်တော် ပြောချင်သည်မှာ ဂန္ဒီကြီး အကြောင်းမဟုတ်ပါ။ ရထားပေါ်မှာ ဖတ်ဖြစ်ခဲ့သည့် ကဗျာ တစ်ပုဒ်အကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ပိတောက်ပွင့်သစ် မဂ္ဂဇင်းတွင် ဖော်ပြပါရှိခဲ့သည့် ဆရာ ခေးကို ၏ ကဗျာဖြစ်သည်။
ဤကဗျာကို ညွန်းဆိုပြီး ရေးဖွဲ့ထားသော ရသစာတမ်းဆောင်းပါးများ ရှိပါသည်။ ၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာလ ပိတောက်ပွင့်သစ် မဂ္ဂဇင်း တွင်ပါရှိသော ဆရာနီဟိန်းမော်၏ သိုးယောင်ဆောင်သော စနေနေ့များ နှင့် ၂၀၁၁ မတ်လ ပိတောက်ပွင့်သစ် မဂ္ဂဇင်း တွင် ဖော်ပြပါရှိသော ဆရာသော်ဇင်အုန်း၏ တစ်ရံလုံး ပေးလိုက်မှာလား တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။
မနက်ဖြန် မနက် ရထားပေါ်အတက်မှာ ဖိနပ် မကျွတ်အောင် မင်းရော ခြေချောင်းတွေကို ကုတ်ထားမှာလား၊ တစ်စုံတယောက်က ကျွန်တော့်ကို မေးနေသည်။ ဒါလား....အင်း....ဒီနေ့ညတော့ မိုးချုပ်နေလို့ပါဗျာ။ အဆင်ပြေရင် မနက်ဖြန်မှ ဒီကိစ္စ ဆက်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့နော်။
ထွက်ပေါက်ရသွားသလို သက်ပြင်းခိုးချလိုက်သည်။ ညသည် အရာအားလုံးကို မသိချင်ယောင်ဆောင်နေ၏။
Labels: ရထားပေါ်မှာ ဖတ်တဲ့စာ......
အသွား တစ်နာရီ၊ အပြန် တစ်နာရီကြာသော ရထားပေါ်မှာ နေ့စဉ် ဖတ်ဖြစ်သည့် စာအုပ်များထဲမှ တစ်မျိုးတမည် ခံစားမိသည့် စာများ ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာကျော်ဝင်း ရေးသားထားသည့် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှ အစပိုင်း အခန်း နှစ်ခန်းကို တိုက်ရိုက်တင်ပြပါသည်။ ဖတ်ကြည့်သင့်သည့် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ဖြစ်သည်ဟု ထင်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် ဖော်ပြခွင့်ပြုပါရန် မူရင်းဆောင်းပါးပိုင်ရှင် ဆရာကျော်ဝင်းအား ဤစာဖြင့် ပန်ကြားအပ်ပါသည်။
သခင်သန်းဖေ၊ သခင်နု နှင့် ဦးကျော်ငြိမ်း တို့ကို ၂၁ ရာစုသို့ ပြန်ခေါ်ကြည့်ခြင်း
The Waves Magazine, 2/11. April. 2011
(စာမျက်နှာ ၉၇ - ၁၀၀ ။ )
၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၄ ရက်နေ့ လွတ်လပ်ရေး ကြေညာပြီး နာရီပိုင်းအကြာ ....။ ဤနေ့၊ ဤအချိန်တွင် လွတ်လပ်သော ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးအကြိမ် ယာယီပါလီမန် (တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်) အစည်းအဝေးကို ကျင်းပခဲ့သည်။ ဤအစည်းအဝေးကြီးမှာပင် ၀န်ကြီးချုပ် သခင်နုက ယမန်နှစ် ၁၉၄၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့က ချုပ်ဆိုခဲ့သော အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ စာချုပ် (နု အက်တလီ စာချုပ်) ကို အတည်ပြုရန် တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ ဤတွင် ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ် ပါတီ (ဗကပ) မှ ဖြူးပါလီမန်အမတ် သခင်သန်းဖေက ထိုစာချုပ်ကို အတည်မပြုရန် ဝေဖန် ကန့်ကွက်ခဲ့သည်။
သခင်သန်းဖေ၏ ဝေဖန်ချက်ကို အနှစ်ချုပ်လိုက်လျှင် အချက် သုံးချက်ကို တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်။
၁။ ယနေ့ နံနက် ၄ နာရီ မိနစ် ၂၀ က ကြေညာလိုက်သော လွတ်လပ်ရေးမှာ နု အက်တလီ စာချုပ်ကြောင့် ထွက်ပေါ်လာသည်မဟုတ်။ နှစ်ပေါင်း ၁၂၀ ကျော် အဆက်မပြတ် တိုက်ခိုက်ခဲ့သော လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ၏ အကျိုးဆက်သာဖြစ်သည်။ ဤသို့ မြန်မာ့သွေးနှင့်ရင်းပြီး မြန်မာ့အားနှင့် တိုက်ခဲ့ရသည့် လွတ်လပ်ရေး ဖြစ်သည့်အတွက် မိမိတို့ ကွန်မြူနစ်များအနေနှင့် ၀မ်းပန်းတသာ ကြိုဆိုသည်။
၂။ သို့သော် အဆိုပါစာချုပ်မှာပင် ဗြိတိသျှစစ်မစ်ရှင်မှလွဲ၍ ဓနသဟာရအဖွဲ့ ပြင်ပရှိ နိုင်ငံများမှ မည်သည့် စစ်မစ်ရှင်ကိုမှ လက်မခံရ ဆိုသော အချက်ပါရှိသဖြင့်၊ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကို အင်္ဂလိပ်က စစ်ရေးအရ စွက်ဖက်ခြယ်လှယ်ရာ ရောက်နေသည်။
၃။ ထို့ထက် အရေးကြီးသည်မှာ၊ အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့သမားဘက်မှ စီးပွားရေးအရ ဆက်လက် သွေးစုပ်နိုင်မည့် ရေခံမြေခံအချို့ စာချုပ်တွင် ပါရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာအစိုးရက ပေးဆပ်ရမည့် အကြွေး ၄၉ ဒသမ ၆၇ ကုဋေနှင့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများကို ပြည်သူပိုင်သိမ်းလျှင် လျော်ကြေး ပေးရမည်ဆိုသော အချက်များမှာ ထင်ရှားသော သာဓကများဖြစ်သည်။ သို့အတွက် စာချုပ်အရ အင်္ဂလိပ်ပေးသည့် လွတ်လပ်ရေးမှာ နိုင်ငံရေးအရ လွတ်လပ်သော်လည်း စီးပွားရေးအရ မလွတ်လပ်သဖြင့် အဆိုပါစာချုပ် (နုအက်တလီစာချုပ်) ကို မြန်မာ ပါလီမန်မှ အတည်မပြုသင့်ကြောင်း တင်ပြသွားပါသည်။
သခင်သန်းဖေ၏ ဝေဖန်ချက်ကို ပထမဆုံး ၀န်ကြီးချုပ် သခင်နုက ပြန်လည် ချေပပါသည်။ သူက ဗြိတိသျှစစ်မစ်ရှင် (သခင်နု စကားအရဆိုရလျှင် ဗြိတိသျှစစ်အတတ်သင်အဖွဲ့) ကိစ္စကို စရှင်းသည်။ အမှန်စင်စစ်ဗြိတိသျှစစ်မစ်ရှင်အဖွဲ့ကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်မှာ မြန်မာဘက်မှသာဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့တပ်မတော်ကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနိုင်ရန် ဤသို့ တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဤသို့ အင်္ဂလိပ်စစ်မစ်ရှင်နှင့် စစ်ပညာသင်ကြားနေစဉ် အခြားမစ်ရှင်များကို လက်မခံဖို့ သဘောတူခဲ့သည်မှာ 'ဆရာများ သားသေ' မဖြစ်စေလို၍သာဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
ဆက်လက်ပြီး စီးပွားရေးအရ မလွတ်လပ်ဆိုသော အချက်ကို ပြန်လည်ချေပသည်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီများကို ပြည်သူပိုင်သိမ်းလျှင် လျှော်ကြေးပေးရမည်ဆိုသောအချက်ကို၊ ထိုစဉ်က ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံ တစ်ခုဖြစ်သော ယူဂိုဆလားဗီးယားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြီး ယခုလိုဆိုသည်။ "ဆိုဗီယက် ရုရှားနဲ့ ကပ်နေပြီး အင်မတန် တန်ခိုးကြီးတဲ့ စတာလင် တစ်ယောက်လုံး အားကိုးရှိတဲ့ ယူဂိုဆလားဗီးယားတောင်မှ လျော်ကြေးပေးသေးရင်၊ ကျွန်တော်တော့ ခပ်ရှင်းရှင်းပဲ ပြောပါရစေ။ ဂျိုရှီတို့၊ ဂိုရှယ်တို့ဆိုတဲ့ တစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စ အားကိုးနဲ့ မြန်မာပြည်မှာ လျော်ကြေး မပေးဘဲ အတင်းသိမ်းတဲ့ အလုပ်ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ မလုပ်ရဲဘူး။ ဒီလို လုပ်ရမယ်လို့ ကွန်မြူနစ်တွေ ယုံကြည်ရင်တော့ အတင်းသိမ်းကြပါ။....." (ဂျိုရှီမှာ ထိုစဉ်က အိန္ဒိယကွန်မြူနစ်ပါတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးဖြစ်ပြီး ဂိုရှယ်မှာ ဗကပ ပေါလစ်ဗျူရို အဖွဲ့ဝင် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးဖြစ်သည်။)
ထို့နောက် ဦးကျော်ငြိမ်းက သခင်နု ချေပချက်ကို ထောက်ခံတင်ပြပါသည်။ သူကလည်း စီးပွားရေးအရ မလွတ်လပ်ဆိုသော စွပ်စွဲချက်ကို ဦးတည်ရှင်းသည်။ အထူးသဖြင့် ကြွေးမြီကိစ္စကို အခြားနိုင်ငံများနှင့် ယှဉ်ပြပြီး ကွန်မြူနစ်များ ပုံကြီးချဲ့သလောက် ပြဿနာ မရှိနိုင်ကြောင်း ထောက်ပြသည်။ အကယ်၍ အကြွေး တစ်ပြားမှ မဆပ်ဘဲ လွတ်လပ်ရေး ဇွတ်ကြေညာလျှင်လည်းဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အကျိုးဆက်များကိုမူ လက်တွေ့ကျကျ သုံးသပ်ဖို့လိုကြောင်း၊ မိမိတို့ အနေနှင့် အေးအေးညောင်းညောင်း ဖြစ်နိုင်မည့် လမ်းကြောင်းကိုသာ ရွေးချယ်သင့်ကြောင်း ရှင်းပြသည်။
ပြောရလျှင် ဤ 'ဒီဘိတ်' ကြီးသည်ပင်၊ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး၏ အဖွင့်ဇာတ်ကွက်ဖြစ်ပါသည်။ မကြာမတင်လာတော့မည့် ပြည်တွင်းစစ် ဇာတ်နာကြီး၏ အဖွင့်တီးလုံးဟုလည်း ဆိုနိုင်လိမ့်မည်ထင်ပါသည်။
၀န်ခံရလျှင်၊ ဆိုခဲ့ပါ ဒီဘိတ်ကြီးကို စာရေးသူ (ဆရာကျော်ဝင်း) စတင်ကြားရ၊ သိရ၊ ဖတ်ရစဉ်က သခင်သန်းဖေဘက်တွင် လုံးလုံးလျားလျား ရှိနေခဲ့ပါသည်။ သူ့ဝေဖန်ချက်ကမှ သဘောတရားရေးအထိုင်နှင့် စီးစီးပိုင်ပိုင်ရှိသည်ဟု မြင်ခဲ့သည်။ သခင်နုနှင့် ဦးကျော်ငြိမ်းတို့၏ ချေပချက်တွေမှာ သဘောတရားရေး အလင်းရောင် ကင်းမဲ့သော Common Sense ဟုထင်ကာ အထင်မကြီးနိုင် ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ယခုမှ ပြန်တွေးကြည့်လိုက်သောအခါ သူတို့တတွေမှာ မတူသော ချဉ်းကပ်မှု နှစ်မျိုးကို ကိုယ်စားပြုပါလား ဆင်ခြင်မိတော့သည်။ "နှုန်းစံအခြေပြု ချဉ်းကပ်နည်း" (Normative Approach) နှင့် "လက်တွေ့အခြေပြု ချဉ်းကပ်နည်း" (Pragmatic Approach) ....။
သခင်သန်းဖေက သူယုံကြည်သော ကွန်မြူနစ်စံများနှင့် လွတ်လပ်ရေးကို ဝေဖန်သည်။ နိုင်ငံခြား အရင်းအနှီးဆိုလျှင် လွတ်လပ်ရေးကို နှောင်ကြိုးတဲထားသည့် သွေးစုပ်မှု ရေခံမြေခံ။ စီးပွားရေးအရ မလွတ်လပ်လျှင် နိုင်ငံရေးအရ လွတ်လပ်မှုမှာ ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိ။ သို့အတွက် အတုအယောင် လွတ်လပ်ရေး၊ သခင်နုတို့ကမူ တိုင်းပြည်၏ ပကတိအရှိအပေါ် အခြေခံပြီး လက်တွေ့ ဖြစ်နိုင်ခြေကိုသာ စဉ်းစားသည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် သူတို့ ကိုယ်တိုင်က ဘာအကြွေးမှ မပေးချင်၊ ဘာလျော်ကြေးမှ မပေးချင်။ သို့သော် နောက်ထပ် စစ်ပွဲတစ်ပွဲနှင့် ရင်းရမည်ကိုကား မလိုလား။ နောက်ဆုံး နာကျင်မှု အနည်းဆုံး လမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်ခြင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
သို့နှင့်တိုင် ထိုစဉ်ကာလ စာရေးသူမှာ (ဆရာကျော်ဝင်း) လူပျိုပင် မဖြစ်တတ်သေးသော ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်။ မာ့ခ်ဝါဒ သဘောတရားကျမ်းကြီးများကို မမီမကန်းနှင့် အငမ်းမရ ဖတ်နေချိန်။ လက်တွေ့ ဖြတ်သန်းမှုဆို၍လည်း ဘာတစ်ခုမှ မရှိသေးသည်ဖြစ်ရာ "သွေးစုပ်မှု ရေခံမြေခံ" စသော စကားလုံး ပြောင်ပြောင်တွေအပေါ် ယောင်နနစွဲလမ်းနေမိသည်ကို ၀န်ခံရပါလိမ့်မည်။ ယခု နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော် ၅၀ နီးပါး ကြာသောအခါတွင်ကား၊ ထိုစဉ်က "သွေးစုပ်မှု ရေခံမြေခံ" ယခုအခေါ် FDI (နိုင်ငံခြား တိုက်ရိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု) ကို အနီဆုံး နိုင်ငံကြီးများကပင် တံခါးကျယ်ကျယ်ဖွင့်၍ အပြိုင်အဆိုင် ဖိတ်ခေါ်နေကြပေပြီ။ ယခင် နားလည်ချက်အရ ဆိုရလျှင်၊ သွေးစုပ်ခံရမည့်ဘက်က "လာပါ ယူပါ" ခေါ်နေရချိန်တွင်၊ သွေးစုပ်မည့်ဘက်က စုပ်သင့် မစုပ်သင့် ချိန်ဆနေရသလိုပင် ဖြစ်တော့သည်။ ဤသည်ပင် သမိုင်း၏ "ထေ့ငေါ့သရော်စရာ" (Ironic) ဟု ဆိုရချေမည်လားမသိ။
၀ီကီမြန်မာတွင် ဖော်ပြထားသည့် ကိုဆွေ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းအား ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
မူရင်းလင့်ခ် - http://wikimyanmar.co.cc/wiki/index.php?title=ကိုဆွေ
၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် ပြည်မြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ ငယ်စဉ်က ပြည်မြို့ အစိုးရ အထက်တန်းကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် မိုးဝေစာပေမဂ္ဂဇင်းတွင် လိမ္မော်သီးတစ်လုံး ဝတ္ထုတို စတင်ဖော်ပြခြင်းခံရပြီး ဟန်သစ်၊ ရုပ်ရှင်တေးကဗျာ၊ ရနံ့သစ် မဂ္ဂဇင်းများတွင် ဝတ္ထုတိုများရေးသားခဲ့သည်။
ဝတ္ထုတို လုံးချင်းစာအုပ်များ (လိမ္မော်သီးတစ်လုံး နှင့်အခြားဝတ္ထုတိုများ၊ မှော်တောင်ကုန်း) တို့ကို ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ကိုးကား -၂၀ ရာစု မြန်မာဝတ္ထုတို ၁၀၀ စာရေးဆရာ ၁၀၀၊ သီဟရတနာအုပ် ၁၀၀ပြည့် အထူးထုတ်
ကိုဆွေ၏ နေကြာပန်း ဝတ္ထုကို ဟန်သစ်မဂ္ဂဇင်းတွင် ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ပုံနှိပ်မှတ်တမ်းကို မမှတ်သားမိခဲ့ပါ။ သိမ်းဆည်းထားသည့် မဂ္ဂဇင်းဖြတ်စများထဲမှ ပြည်မြို့ အမှတ်တရ တင်ပြပါသည်။ ဖော်ပြခွင့်ပြုပါရန် မူရင်း ဝတ္ထုရေးသူ ကိုဆွေအား လေးစားစွာ ပန်ကြားအပ်ပါသည်။
ကျွန်တော်သည် လိမ္မော်သီးတစ်လုံး နှင့်အခြားဝတ္ထုတိုများ ကိုဖတ်ခဲ့ဖူးပြီး မှော်တောင်ကုန်း ကိုတော့ မဖတ်ဖူးသေးပါ။
နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ဦးအဖြစ် ပြည်သူများက အလိုအလျှောက် ရွေးချယ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များတွင် တုနှိုင်းမမီသည့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး များစွာရှိပါသည်။ ထိုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများထဲတွင် တာဝန်ယူတတ်ခြင်း၊ တာဝန်ယူနိုင်ခြင်း၊ တာဝန်ယူရဲခြင်း စိတ်ဓါတ်သည် ထိုခေါင်းဆောင်များ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ထိုဂုဏ်သိက္ခာသည် ခေါင်းဆောင်များ၏ ပကတိ အဆင့်အတန်းလည်း ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ တာဝန်ယူရဲခြင်း ဂုဏ်သိက္ခာအကြောင်းကို ကျွန်တော် တွေးတောနေမိသည်။ ယခု အချိန်ထိ သူ့ကို ပြည်သူများက နှလုံးသွေးဖြင့်ရင်း၍ စွဲလမ်းနေကြခြင်း၏ အကြောင်းရင်း တစ်ခုသည် သူ၏ တာဝန်ယူရဲခြင်း စိတ်ဓါတ်ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် တွေးနေမိသည်မှာ ၁၉၃၆ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်သမဂ္ဂမှ ထုတ်ဝေသော အိုးဝေမဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာ ကိုအောင်ဆန်း၏ တာဝန်ယူရဲခြင်း နှင့် ၁၉၄၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ အတွင်း ဗိုလ်တေဇ ဘ၀က လုပ်ဆောင်ခဲ့မှု တစ်ခုအတွက် ၁၉၄၆ နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ တာဝန်ယူရဲခြင်း အကြောင်း နှစ်ခုဖြစ်သည်။
အယ်ဒီတာ ကိုအောင်ဆန်း အကြောင်း ရေးသားခဲ့ကြသည့် ဆောင်းပါးပေါင်း များစွာထဲမှ ကျွန်တော် အနှစ်သက်ဆုံးများမှာ ဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာ၏ ရုပ်ပုံလွှာ နှင့် ဖျတ်ခနဲ တွေ့ရသော ရုပ်ပုံလွှာ ကားချပ်များ စာအုပ်ထဲတွင် ရေးသားထားသည်များ ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ နတ်မောက်မဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၂ တွင် ဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာ ရေးသားခဲ့သည် အိုးဝေမဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာ ကိုအောင်ဆန်း ဆောင်းပါးကို ဖျတ်ခနဲ တွေ့ရသော....စာအုပ်တွင် ပြန်လည်ဖော်ပြထားပါသည်။ ထိုအထဲမှ အနည်းငယ် ကောက်နှုတ် တင်ပြလိုပါသည်။
"သူ အိုးဝေမဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာ ဖြစ်စဉ်က သူတည်းဖြတ်သော မဂ္ဂဇင်းထဲတွင် ထိုအခါက တက္ကသိုလ် အာဏာပိုင်တစ်ဦး၏ မနှစ်မြို့ဖွယ်ရာ သူတစ်ယောက်အကြောင်းကို ပြောင်လှောင်ရေးထားသော ဆောင်းပါး ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသည်။ ရေးသူက ကိုညိုမြ။ တက္ကသိုလ် သပိတ်မှောက်ကိစ္စ အခိုးအငွေ့များ ထွက်နေစဉ် တက္ကသိုလ် အာဏာပိုင်တို့က ကျောင်းမှ အယ်ဒီတာ ကိုအောင်ဆန်းကို ထုတ်ပစ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ထားသည်။ ဆောင်းပါးရေးသူ၏ အမည်ကို ဖော်ထုတ်ပါဟု ဆိုသည်။ သူ မဖော်ထုတ်။ ဆောင်းပါးရေးသူကို ဖော်ထုတ်လျှင် သူ့ကို ကျောင်းမထုတ်ဘဲ ဆောင်းပါးရေးသူကိုသာ အပြစ်ပေးမည်ဟု ယူဆရသည်။
သူက သူ တာဝန်ယူမည်ဟု ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြောလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်က အိုးဝေမဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာ ကိုအောင်ဆန်းကို စွဲလမ်းသွားသည်။" (ဒုတိယအကြိမ်ထုတ် စာမျက်နှာ ၁၃၃)
အိုးဝေမဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာ ကိုအောင်ဆန်း၊ ၁၉၃၆ ခုနှစ်
(ဓါတ်ပုံကို ဖျတ်ခနဲ တွေ့ရသော ရုပ်ပုံလွှာ ကားချပ်များ စာအုပ် ၊ စာမျက်နှာ ၁၂၉ မှ ရယူတင်ပြထားပါသည်)
မျက်နှာဖုံး - ပေါ်ဦးသက်
ရုပ်ပုံလွှာ ၊ ဒဂုန်တာရာ ၊ ပုဂံစာအုပ်တိုက် ၊ ဒုတိယအကြိမ် ၊ ၁၉၆၃ ခုနှစ်
မျက်နှာဖုံး ပန်းချီ - ပိုပို
ဖျတ်ခနဲ တွေ့ရသော ရုပ်ပုံလွှာ ကားချပ်များ ၊ ဒဂုန်တာရာ
ရာပြည့်စာအုပ်တိုက် ၊ ပထမအကြိမ် ၊ ၁၉၉၇ ဒီဇင်ဘာ ၁
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ တာဝန်ယူရဲသည့် ဂုဏ်သိက္ခာ နောက်ထပ်ပြယုဒ်တစ်ခုမှာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါသည်။ လက်လှမ်းမီသည့် စာအုပ် ၂ အုပ်မှ မှီငြမ်း ကိုးကားတင်ပြလိုပါသည်။
၁။ နိုင်ငံရေး အတွေ့အကြုံများ ၊ ကိုသန်း (ကြည့်မြင်တိုင်)
ပင်ဝါးရုံစာပေ ၊ ပထမအကြိမ် ၊ ၂၀၀၉ နိုဝင်ဘာ ၊
၂။ မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ ၊ ကျော်အောင်
Last and First in Burma by Maurice Collis
ရာပြည့်စာအုပ်တိုက် ၊ ပထမအကြိမ် ၊ ၂၀၁၁ ဇန်န၀ါရီ ၊
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဗိုလ်ရန်အောင်နှင့် သခင်ထွန်းအုပ်တို့ ပါဝင်သော ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် စစ်ဌာနချုပ်သည်လည်း မော်လမြိုင်စစ်ကြောင်းနှင့် လိုက်ပါခဲ့ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းရှိ သာဆောင်ရန်းမှ တောအထပ်ထပ် တောင်အထပ်ထပ်ကို ဖြတ်ကျော် ချီတက်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာနယ်စပ်ကို ဖြတ်ကျော်ပြီး သံလွင်မြစ်ကို ဖြတ်ကူးသည်။ ထို့နောက် မဲပလီ၊ ယင်းပိုင်တို့မှတစ်ဆင့် ဘီးလင်းမြစ်ကို ဖြတ်ကူးကာ ၀မဲလူ၊ ၀င်းကလုံမှ ဆက်လက် ချီတက်ခဲ့ကြရာ စစ်တောင်းမြစ်ကမ်းပေါ်ရှိ ကွမ်းဆိပ်သို့ ရောက်သည်။ ယင်းသို့ ချီတက်ခဲ့ရာတွင် သထုံခရိုင် ပေါင်မြို့နယ် အတွင်းမှ သဲဖြူကုန်းရွာ ကုလားသူကြီးသည် အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်များ အတွက် သူလျှိုလုပ်ပေးရပြီး ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်ကိုလည်း အဖျက်အမှောင့်လုပ်ငန်းများ လုပ်ခဲ့ကြောင်း ရွာလူထုက တိုင်ကြားသည်။ အထောက်အထား ခိုင်ခိုင်လုံလုံဖြင့် တိုင်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုအခါ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် စစ်ဌာနချုပ်က ကုလားသူကြီးကို ဖမ်းဆီးပြီး စစ်ခုံရုံးဖွဲ့ စစ်ဆေးသည်။ စစ်ဆေးရာတွင် ပြစ်မှုထင်ရှားသဖြင့် သေဒဏ်ပေးရန် စစ်ခုံရုံးက ဆုံးဖြတ်သည်။ (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက စစ်ခုံးရုံး ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သည်) ထိုအင်္ဂလိပ် သူလျှို ကုလားသူကြီးကို မုတ္တမမြို့ ဘောလုံးကွင်းထဲတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင် ဓါးရှည်ဖြင့် ခုတ်ပြီး ကွပ်မျက်ခဲ့သည်။ တော်တော်နှင့် မသေသဖြင့် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ပြီး အဆုံးစီရင်ရန် အမိန့်ပေးရသည်ဟု ဆိုသည်။ သူလျှို ကွပ်မျက်ပွဲသို့ လူအမြောက်အမြား လာရောက် ကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။
ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် ချီတက်လာရာ လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် အင်္ဂလိပ်သူလျှိုများ၊ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကို နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးသူများ၊ ပဉ္စမံများ၊ အလိုတော်ရိများ၊ သူခိုးဓါးပြများကို သုတ်သင်ခဲ့ကြရသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ခဲ့သဖြင့် ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်ရှိ မြို့ရွာ ကျေးလက်ဒေသများသည် ရေခဲနှင်းဆောင်းတမျှ အလွန်အေးချမ်းခဲ့သည်။ တံခါးမပိတ်ဘဲ အိပ်လျှင်ပင် ခိုးမည့်သူမရှိ။ မှုခင်းမရှိသလောက် နည်းသည်။ သဲဖြူကုန်း သူကြီးကို သေဒဏ် ပေးခဲ့သည့် ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် ချီတက်ခဲ့ရာ လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် သေဒဏ်ပေး ကွပ်မျက်ခဲ့သည့် အမှုပေါင်းများစွာ အနက်မှ တစ်ခုသာဖြစ်သည်။
စာရေးသူသည် (ကိုသန်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်) ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်မှ သေဒဏ်ပေး ကွပ်မျက်မှု နှစ်ခုကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ တစ်ခုက စိန့်မိုက်ကယ် မျက်မမြင်ကျောင်းဝင်း အတွင်း ဓါးပြတစ်ယောက်ကို ဗိုလ်ကျော်ဇောက လှံစွပ်ထိုး ကွပ်မျက်မှု ၊ နောက်တစ်ခု ဟင်္သာတမြို့ ဘောလုံးကွင်းအတွင်း ဗိုလ်ရန်နိုင်၏ နောက်ချန်တပ်ဖြစ်သော ဗိုလ်သန်းအောင်၏ တပ်က ဓါးပြတစ်ဦးအား လှံစွပ်ထိုး ကွပ်မျက်မှုတို့ ဖြစ်သည်။ ယင်းအတွက် မည်သူ့ကိုမျှ အရေးယူသည်ဟု မကြားခဲ့ရပေ။"
(နိုင်ငံရေး အတွေ့အကြုံများ စာအုပ် ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဖမ်းဆီးရန် နယ်ချဲ့တို့ ကြိုးပမ်းခဲ့စဉ်က ဆောင်းပါး ၊ စာမျက်နှာ ၉၉ - ၁၀၀)
အထက်ပါ ဖြစ်ရပ်သည် ၁၉၄၁ ဒီဇင်ဘာလ ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်း ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင်း ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသည့် ဘုရင်ခံ ဒေါ်မန်စမစ်၏ ဥပဒေပြုကောင်စီ အစည်းအဝေးကို ၁၉၄၆ခု ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ၁၉၄၁ ခုနှစ်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အတူ စစ်ချီခဲ့သည့် သခင်ထွန်းအုပ်သည်လည်း ထိုဥပဒေပြုကောင်စီတွင် အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သခင်ထွန်းအုပ်က ထိုအစည်းအဝေးတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအား လူသတ်တရားခံအဖြစ် စွပ်စွဲလိုက်သည်။ လူသတ်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးရမည်။ သခင်ထွန်းအုပ်က သူကိုယ်တိုင် မျက်မြင်သက်သေအဖြစ် ရုံးတွင် သက်သေခံမည်ဟု တင်ပြသည်။ (အသေးစိတ်ကို ဆရာကျော်အောင် ဘာသာပြန်ထားသည့် မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ စာအုပ် ၊ အောင်ဆန်းနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း အခန်း ၊ စာမျက်နှာ ၃၈၈တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။)
ထိုသတင်းသည် ရန်ကုန်သတင်းစာများ၊ လန်ဒန်သတင်းစာများတွင် ပျံ့နှံ့သွားသည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကို ဖမ်းဆီးချင်နေသည့် အင်္ဂလိပ်တို့ ပိုမို ဗျာများသွားသည်။ ဖမ်းဆီးရန် သင့် မသင့် နယ်ဘက် စစ်ဘက် ခေါင်းဆောင်များ ခေါင်းချင်းဆိုင်ကြသည်။ ဘုရင်ခံက ဖမ်းဆီးချင်နေသူ ဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ချင်း ဆက်သွယ်မှု၏ အကျိုးတရားများကို ယုံကြည်သူ ဘုရင်ခံ ဒေါ်မန်စမစ်က ၁၉၄၆ ခုနှစ် မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို အစိုးရအိမ်တော်သို့ ဖိတ်ခေါ်ပြီး တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
"ဘုရင်ခံက သူကြီးကွပ်မျက်မှု အကြောင်းကို မေးမြန်းသောအခါ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ရှောင်လွှဲဖုံးကွယ်ခြင်း အလျဉ်းမပြုဘဲ ယင်းအမှုအတွက် သူ့တွင် တာဝန်ရှိသည်ဟု မဆိုင်းမတွ ပြောသည်။ ဣနြေ္ဒမပျက် တည်ငြိမ်စွာ ပြောခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရင်ခံပင် အံ့သြသွားသည်။ ထိုသူကြီးကို ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် စစ်ခုံးရုံးက စစ်ဆေးပြီး သေဒဏ်အပြစ်ပေး၍ ကွပ်မျက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ဘုရင်ခံကို ပြောသည်"
(နိုင်ငံရေး အတွေ့အကြုံများ စာအုပ် ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဖမ်းဆီးရန် နယ်ချဲ့တို့ ကြိုးပမ်းခဲ့စဉ်က ဆောင်းပါး ၊ စာမျက်နှာ ၁၀၉)
ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာဖြင့် တာဝန်ယူတတ်သော အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီးသည် သူချစ်မြတ်နိုးလှသော တိုင်းပြည်ကို ချန်ထားရစ်ကာ ထွက်ခွာသွားခဲ့လေပြီ။ တိုင်းပြည်မှာတော့ ကျန်ရစ်နေသေးသည့် တာဝန်မယူတတ်သူတို့နှင့် ရှေ့သို့ ဆက်၍ .......... ။
မျက်နှာဖုံး ဒီဇိုင်း - သန်းမြင့်အောင်
မျက်နှာဖုံး ပန်းချီ - လင်းဝဏ္ဏ ဒီဇိုင်းဖွဲ့သည်
ဓါတ်ပုံကို မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ စာအုပ်၊ စာမျက်နှာ ၄၂၄ မှ ကူးယူ တင်ပြထားပါသည်။
- စာအုပ်များ၊ ဆောင်းပါးများ၊ ဓါတ်ပုံများ၊ အချက်အလက်များကို မှီငြမ်း သုံးစွဲခွင့်ပြုပါရန်
- ဆောင်းပါးများမှ တိုက်ရိုက်ကူးယူထားသည်များကို အနီရောင် စာလုံးများဖြင့် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
ပို့စ်စကတ်ကို အမှတ်တရ သိမ်းဆည်းနိုင်စေဖို့
သတင်းလေး တစ်ခု ၊ ဗိုလ်တထောင် သတင်းစာ ၊ ၂၈-၇-၈၈ ၊ စာမျက်နှာ ၁ ။
ဗိုလ်တထောင် သတင်းစာ ၊ ၂၈-၇-၈၈ ၊ စာမျက်နှာ ၁ ။